Mavericks OS ကိုပြီးသားပေါ်မှာအပြေး 40 Apple က Macs ၏ရာခိုင်နှုန်းက - သတင်း Rule
Mavericks OS ကိုပြီးသားပေါ်မှာအပြေး 40 Apple က Macs ၏ရာခိုင်နှုန်းက
Apple ရဲ့ OS X Mavericks operating system (THE) ယခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ် 40 Macs ၏ရာခိုင်နှုန်းက, အွန်လိုင်းကြော်ငြာကွန်ယက်ကို Chitika မှတစ်ဦးအစီရင်ခံစာအခိုင်အမာသိရသည်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြား၎င်း၏ network ပေါ်မှာသောင်းချီ OS X ကို-based ကြော်ငြာဆွဲဆောင်မှုသန်းပေါင်းများစွာ၏ကြည့်ရှု 17 မတ်လနှင့် 23 ကနိဂုံးချုပ်လာရန်မတ်လ, Apple ရဲ့ရှိသမျှကိုမရရှိနိုင်ဗားရှင်း၏ဟု Mac က software ကို, Mac OS X ကိုတူအဟောင်းတွေဗားရှင်းအပါအဝင် 10.8 Mountain Lion ကိုနှင့် Mac OS X ကို 10.7 ခြင်္သေ့သည်, 40 ကို web traffic ကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ Mac OS X ကိုမှလာ 10.9 Mavericks.
ကချမှတ် Apple က Mavericks 40 အားလုံး Mac အသုံးပြုသူများ၏ရာခိုင်နှုန်းက
Apple ကသူ့ရဲ့နဲ့ Mac OS X ကိုဖြန့်ချိ 10.9 ကိုယ့်ငါးလအကြာက Mavericks OS နဲ့အခမဲ့ download အဖြစ်ကရရှိနိုင်ပါအောင်သဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်အံ့အားသင့်. ဒါဟာစျေးနှုန်း၏မရှိခြင်းထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းမှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတာဝန်ယူကြောင်းဖွယ်ရှိသည်.
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်, Windows ကိုအသုံးပြုသူအများစုမှာဟောင်းနွမ်းဗားရှင်းပြေးနေကြတယ်. ဖေဖေါ်ဝါရီလအဆိုအရ 2014 Net Applications ကနေ stats, သာ 11 မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က OS နှင့်အတူစက်၏ရာခိုင်နှုန်းက Windows ကိုပြေးနေကြတယ် 8, အတူ 47 Windows ကိုမျက်နှာသာအသုံးပြုသူရာခိုင်နှုန်းက7နှင့်တစ်ဦးဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 30 Windows XP ကို​​ဖက်တွယ်ရာခိုင်နှုန်းက, လက်ခံမထားတဲ့ဖြစ်လာရန်အကြောင်းပါသော.
Microsoft ကတစ်အသစ်များက Windows ဗားရှင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန် XP ကို​​အသုံးပြုသူများကဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့လှည့်ကွက်တစ်ခုအကွာအဝေးကြိုးစားခဲ့, 12 နှစ်အရွယ်စနစ်ဖြင့်ကပ်၏ဆိုးရွားလုံခြုံရေးအကျိုးဆက်များ၏သတိပေးမှုအပါအဝင်အသစ်က Windows ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်အထူးလျှော့စျေးရာပူဇော်သက္ကာ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Apple ကပြုတော်မူပြီကဲ့သို့ OS ကိုအခမဲ့အဆင့်မြှင့်တင်အောင်, ပိုပြီးပညာရှိနည်းဗျူဟာသည်.
Apple ကလည်းတစ်ဦးနဲ့ Mac OS X ကိုဖြန့်ချိ 10.9.1 ဒီဇင်ဘာလ၌ update ကိုဒါပေမယ့်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစုံတခုကိုမျှမကယ်မလွှတ်ပျက်ကွက်, ဒါကြောင့်အများအားဖြင့် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်အသေးအဖွဲအပြောင်းအလဲကိုကမ်းလှမ်းအဖြစ်.
Mac OS X ကို 10.9.1 ကိုဆောင်ခဲ့ “OS X ကိုမေးလ်ထဲမှာ Gmail ကိုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ထောက်ခံမှု, နှင့်ထုံးစံဂျီမေးလ် setting များကိုအသုံးပြုသူများနှင့်ပြင်ဆင်” အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မတ်စာတိုက်ပုံး၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတိုးတက်လာနှင့်မေးလ်ထဲမှာရှာဖွေ.
အဆိုပါ Mavericks update ကိုလည်းရုပ်ပြောင်ပါရှိသောကြောင့်စာကြောင်းများထွက်စာဖတ်ခြင်းကနေနောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့ရပ်တန့်တဲ့ပြဿနာကို fixed. သူတို့ Non-အင်္ဂလိပ်စနစ်များအပေါ်ကို update မယ်လို့ထို့ကြောင့်အခြားပြုပြင်မှုများအ iLife နှင့်ထုတ် iWork ဆော့ဖ်ဝဲတွင်လည်း app များမှ updates များကိုထည့်သွင်း, နှင့်လိပ်စာလယ်ကွင်း populating ကနေဆက်သွယ်ပါအုပ်စုအမည်တားဆီးထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဆေးတစ်လက်. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
20402	0 မက်, ပါ Macintosh, Maverick, ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်, OS X ကို
← ဂေးစုံတွဲအင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား Zuckerberg ဟာဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများများအတွက် Wi-Fi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ် →